अभ्यास ENT र दन्त तयारी "Geksoral" मा प्रयोग गरिएको (मूल्यांकन जो दक्षता र प्रयोग सजिलो बारेमा संकेत) gargling वा ट्याब्लेटको लागि एक स्प्रे समाधान रूपमा उपलब्ध छ। प्रत्येक औषधिको खुराक फारम यसको लाभ छ।
दुखेको घाँटी, गलसुआशोथ, pharyngitis, मुखशोथ,: कारण रोग निम्न एक दबाइ प्रशासन हुन सक्छ postoperative अवधि , मुख सुनिंनु (दन्त चिकित्सा वा ENT व्यवहार मा), जो विभिन्न ब्याकटेरिया वा Fungi छन् गराउँछ। दबाइ को प्रयोग को परिणाम coughing, अल्सर निको कम गर्न छ, घाँटी मा mucosal edema, र दुखाइ कम।
उचित सबैभन्दा भाग, सकारात्मक लागि, लागूपदार्थ "Geksoral" यसको प्रभावकारिता को समीक्षा को प्रयोग संग। उदाहरणका लागि, दुवै समाधान र aerosol मात्र खानाको पछि प्रयोग गरिन्छ। यो दबाइ को mucosa रहन र अर्को भोजन सम्म कार्य गर्न अनुमति दिन्छ।
एक स्प्रे मा निहित सक्रिय पदार्थ, hexetidine कार्य को एक व्यापक स्पेक्ट्रम द्वारा विशेषता छ। यो बाहेक, त्यहाँ मसलाको, anise, पुदीना को आवश्यक तेल र यति मा। तिनीहरूले लागूपदार्थको को रोगाणुरोधी कार्य बृद्धि गर्न योगदान सहित थप सामाग्री, एक नम्बर हो।
ट्याब्लेटको मा, "Geksoral ट्याबहरू", समीक्षाएँ जो पनि आफ्नो प्रभावकारिता, मात्र होइन जीवाणुरोधी तर पनि analgesic प्रभाव पारिरहेको ध्यान दिनुहोस् benzocaine र chlorhexidine समावेश गर्नुहोस्।
rinsing लागि समाधान प्रयोग गर्दा, तपाईंले यसलाई निल्छ सक्दैन सम्झनुपर्छ। को मौखिक गुहा सिंचाई सुविधा उपलब्ध aerosol आफ्नो सास पकड पर्छ भने, कि कण फेफडों फस्न छैन हो। यो एलर्जी एक predisposition मानिसहरूलाई मा bronchospasm सक्छ।
दबाइ को प्रयोग गर्न Contraindications 3-4 वर्ष को उमेर र therein समावेश एक घटक को idiosyncrasy अन्तर्गत छ। यसलाई आफ्नो प्रभावकारिता बावजुद, समीक्षा हो जो ट्याब्लेटको "Geksoral", अक्सर सकारात्मक तरिकामा थप फेला, कि उल्लेख गर्नुपर्छ, प्रयोग गरिनुपर्छ जो केवल आफ्नो डाक्टर संग परामर्श पछि लागूपदार्थ, को तैपनि छन्। जब ब्रोन्कियल ट्यूब मा जारी समाधान वा स्प्रे को संविधान घटक केही विषाक्त बन्न सक्छ, वा esophagus र अप्रिय परिणाम कारण।
दबाइ को कार्य 12 घण्टा लागि डिजाइन गरिएको छ, त्यसैले यसलाई प्रति दिन 8 एकाइहरु सम्म पिउन अनुमति एउटा वयस्क र बच्चाहरु छ जो ट्याबलेट, को अपवाद संग, एक दिन2पटक प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छ -4टुक्रा सम्म। समाधान gargling गर्दा, यो आकस्मिक इन्जेशन गर्न सम्भव छ। अक्सर, यी अवस्थामा छ एक Gag सहज क्रिया, बाहिर शरीर हानिकारक पदार्थ, त्यसैले एक अधिमात्रा दुर्लभ छ जो। तपाईं अझै पनि धेरै तरल पदार्थ मा पायो भने तुरुन्तै गर्नुपर्छ गैस्ट्रिक lavage, थप उपचार symptomatic छ। उत्पादन रक्सी मा निहित रूपमा मादक विषाक्तता हुन सक्छ विशेष गरी overdosing, बच्चाहरु को लागि हानिकारक छ।
को उपचार मा औषधि प्रयोग गर्नेहरूलाई "Geksoral" (स्प्रे), छेउमा प्रभाव बारे समीक्षा शायद छोड्नुहोस्। लामो समयसम्म उपचार ट्याब्लेटको को मौखिक गुहा मा स्वाद वा numbness को खलबल चिन्ह लगाइएको गर्न सकिन्छ। यो अवधिमा छैन अवधि र lactation दबाइ समयमा प्रतीक्षा बच्चा सावधानीपूर्वक, किनभने आफ्नो चिकित्सीय सुरक्षा डाटा को दिइएको छ।
Geksoral 'समीक्षा अक्सर सिफारिस दबाइ "दुखेको घाँटी वा मौखिक गुहा यस्तो रोग एक बच्चाको छुटकारा गर्न। rinsing लागि पाटी र समाधान - एकै समयमा, यो अप गर्न3वर्ष पुरानो एक स्प्रे प्रयोग छैन, र4वर्ष सम्म सम्झना गर्न महत्त्वपूर्ण छ। यसको संरचना यो देखिन्छ रूपमा हानिरहित छैन गर्दा यो उपकरण, एक उच्च दक्षता भएको एक दबाइ छ, यो मात्र चिकित्सकको सल्लाह यसलाई प्रयोग गर्न एउटा अवसर हो।
प्रयोग, संरचना, प्रयोग र प्रतिक्रियाको लागि निर्देशन: मोमबत्ती "Superlymph"
'Parlodel' हो। निर्देशन
अपार्टमेन्ट सार्ने। सार्दै को संगठन सिफारिसहरू
किन बिरालोहरु को सपना? वास्तविकता को एक प्रतिबिम्ब हाम्रो सपना।
होटल Zheleznogorsk: समीक्षा
को COP के हो? यसलाई कसरी परिभाषित गर्ने?
Mochalov पावेल Stepanovich, अभिनेता MALY थियेटर: जीवनी, रचनात्मकता
को खुट्टा को पुराना ओस्टियोआर्थराइटिस: कारणहरू, लक्षण र उपचार तरिका
लेखक Kerdan Aleksandr: जीवनी र रचनात्मकता को सिंहावलोकन